के कसैले सोध्ने प्रश्न गर्दैछ? | Martech Zone
के कसैले सोध्ने प्रश्न गर्दैछ?
बिहीबार, अप्रिल 26, 2007 मंगलवार, नोभेम्बर 5, 2019 Douglas Karr
तपाईंले मेरो भर्खरको लिंकहरूमध्ये एउटामा याद गर्नुभएको हुनसक्दछ Ask.com र प्रत्यक्ष मा सामेल भएको छ Sitemaps मानक शब्द साइटम्याप एकदम आत्म स्पष्टीकरणात्मक छ - यो खोज ईन्जिनको लागि तपाईंको वेबसाइट सजीलै नक्शा बनाउनको लागि साधन हो। साइटम्यापहरू निर्माणमा छन् XML ताकि तिनीहरू सजिलै प्रोग्रामिंग मार्फत खपत गर्न सकून्। मसँग एउटा ... छ स्टाइलसिट मेरो साइटम्यापमा लागू गरियो ताकि तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ कि कुन जानकारी समाईएको छ।
साइटम्याप र WordPress
संग WordPress, यो स्वचालित र तपाईंको साइटम्याप निर्माण गर्न सरल छ। केवल स्थापना गर्नुहोस् गुगल साइटम्याप प्लगइन। म प्लगइनको b.०b3.0 संस्करण चलाउँदै छु र यो शानदार छ। मैले भर्खरै प्लगइन परिमार्जन गरे र Ask.com सब्मिशन समर्थन पनि थप्यो। मैले विकासकर्तालाई मेरा परिवर्तनहरू सबमिट गरेको छु र आशा छ कि उहाँ तिनीहरूलाई थप्नुहुन्छ र अर्को संस्करण जारी गर्नुहुनेछ।
Ask.com मा तपाईंको साइटम्याप सबमिट गर्दै
तपाइँ तपाइँको साइटम्यापलाई Ask.com मा मैन्युअल तरिकाले उनीहरूको साइट प्रस्तुति उपकरण मार्फत बुझाउन सक्नुहुन्छ:
म यो हेर्न उत्साहित थिएँ र तुरुन्तै मेरो साइट सबमिट गर्‍यो र प्लगइन परिमार्जनमा काम सुरु गरें। मलाई थाहा छ कि Ask.com ले हालसालै उनीहरूको गृह पृष्ठलाई दुरुस्त गर्यो र केहि प्रेस भयो ताकि मैले सोचे कि यसले केही थप ट्राफिकमा नेतृत्व गर्नेछ।
Daily०% भन्दा बढि मेरो दैनिक भ्रमणहरू आउँदछन् गुगल तर मैले अझै एकल आगन्तुकलाई देखेको छु Ask.com! म एउटा ट्रिक देख्छु याहू! आगन्तुकहरु र केहि प्रत्यक्ष आगन्तुकहरू ... तर कुनै Ask.com आगन्तुकहरू छैनन्। Ask.com खोज परिणामहरू हेर्दै, तिनीहरू मध्ये धेरै मेरो उमेरको डोमेन नाम र पुरानो लेखहरूमा धेरै धेरै पुरानो (कहिलेकाँही एक वर्ष पुरानो) देखिन्छन्। हुनसक्छ यो मुख्य कारण हो किन Ask.com ले कुनै ट्राफिक पाइरहेको छैन? के तपाइँ मध्ये कोही Ask.com प्रयोग गर्नुहुन्छ?
आरएसएस भनेको के हो? फिड के हो? एउटा च्यानल के हो?
Prod विचित्र सल्लाहहरू तपाईंको उत्पादकतालाई डबल गर्नका लागि
अप्रिल 26, 2007 मा 11: 20 PM
मैले Ask.com को प्रयास गरेको अन्तिम दुई पटक, मैले धेरै राम्रा खोज परिणामहरू उत्पादन गरेको छैन। यसमा प्रस्तुत धेरै लिंकहरू या त कुनै धेरै थिएनन् वा वास्तवमै पुरानो हो। मलाई थाहा थिएन कसैले पनि केहि प्रयोग गरिरहेको थियो तर गुगलले तर गुगलले के भने। कम्तिमा तिनीहरू नियमित आधारमा अनुक्रमणिका हुन्छन्।
वाह, राम्रो टेक्नोराटी रेटिंग। ती आउन गाह्रो छ।
अप्रिल 27, 2007 मा 6: 49 एएम
अन्तिम टाई मैले मैले सोध्ने कोशिस गर्दा पहिलो चोटि मैले तिनीहरूको बाँदरको विज्ञापनहरू पहिलो पटक देख्यो। मैले फेला पारे कि उनीहरूले ल्याउने नतिजा राम्रो छैनन्। चाखलाग्दो कुरा के हो भने, टेक्नोराटीले उनीहरूलाई शीर्ष स्तरीय खोजी पनि गर्दैन। तपाईले आफ्नो डोमेनलाई सोध्नुहोस् मा खोज्नुहोस्, र फेरी युआरएलको साथ टेक्नोराटीलाई पिंग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई शीर्ष १०० मा ब्लास्ट गर्दैन, तर यो नि: शुल्क टेक्नोराटी ब्याकलिl्क हो!
अप्रिल 27, 2007 मा 3: 31 PM
म .com देखि १० हिटहरू सोध्छु दैनिकबाट (मेरो पुरानो ब्लगमा) पाउँदछु ... र सबै उही लेखमा ... ..
यस साइटम्याप चीजले हाम्रो स्थितिमा सुधार ल्याउँछ कि हेरौं Let's
अप्रिल 27, 2007 मा 6: 35 PM
मलाई यसको बारेमा भन।
मलाई लाग्छ कि मेरो ब्लगमा जाने ट्राफिक एक पहिरो, याहू र लाइभ खोजबाट एक दोस्रो पछि गुगल हो, र सोध्नुहोस् कहाँ फेला परेन।
नोभेम्बर,, २०१ at 29::2007 बिहान
ठिकै मैले भर्खरै यो ब्लग फेला पारे ... तर उत्कृष्ट चीजहरू!
मार्क्स 6, 2008 मा 10: 47 PM
मलाई थाहा छ यो पुरानो लेख हो, तर म तपाईंलाई केवल यो थाहा दिन चाहान्छु कि मैले तपाईंलाई Ask.com मार्फत भेट्टाए! रमाईलो, हैन त?
म Ask.com प्रयोग गर्दछु जब म एकदम खास चीज खोज्दैछु। केही कारणका लागि तिनीहरू सधै मलाई सही दिशामा औंल्याउँछन्।
मार्स 7, 2008 मा 10: 36 एएम
सुन्न कत्ति राम्रो छ! मैले भर्खर पढें सोध्नु केहि मान्छेहरु लाई बिछ्याईरहेको छ र गुगल को उपयोग सोच्दै छ - तर प्रतिक्रिया यो छ कि तिनीहरूको ईन्जिन विशिष्ट प्रश्नहरु मा धेरै राम्रो छ। मैले यो अधिक प्रयोग गरेको छैन, तर तर्क र एल्गोरिदममा राम्रो कुरा सुनेको छ जुन उनीहरूको ईन्जिनमा आधारित छ।